कफीको पारखीका लागि : टोकियोका ७ स्वतन्त्र कफी पसल | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > कफीको पारखीका लागि : टोकियोका ७ स्वतन्त्र कफी पसल
ठुलो बिजिनेस ग्रुप, बिद्यार्थी, पर्यटकको जमात टोकियोको अनेकौ क्याफेमा देख्न सकिन्छ। दिन होस् या रात हजुरले स्टारबक्स, डुतोरु, टलिज, एक्सेलर र क्याफे वेरोची जस्ता कफी पसलमा हजुरले मानिसहरुको लामै लाइन देख्नु हुनेछ। यस्ता पसल हजुरले ट्रेन स्टेसन, गल्लि, वा कुनै बिशाल मलमा देख्न सक्नु हुनेछ। यहाँ कफी संग संगै हजुरले थुप्रै किसिममा खाने कुरा र नास्ता पनि पाउन सक्नु हुनेछ। कफी पसलमा धेरै जसो मानिसहरु कफीको मजा संग संगै पढ्न, काम गर्न, मिटिङ्ग गर्न, गफ गर्न आउछन।
यी ठूला कफी चेनहरू वास्तवमै आफ्नो ठूलो पदचिह्नका कारण निकै सुविधाजनक छन्, तर यस्ता चेन स्टोरले स्वतन्त्र कफी पसलमा प्रवेश गर्ने आनन्दलाई जित्दैन। उनीहरूको कलाकृत बारिस्टा र सुगन्धित कफी पिसेको बास्नानै बेग्लै हुन्छ। अन्य ठुलो शहरमा जस्तै, टोकियोमा धेरै उत्कृष्ट कफि पसलहरू छ जुन कुनै पनि कफी प्रेमीले मुटुको धडकन बढाउनेछ। यहाँ हामीले हाम्रा ७ मनपर्ने कफी शपहरू समेट्ने कोसिस गरेका छौं। यी पसल कुनै विशेष क्रममा सूचीबद्ध छैनन।
१. ग्लिच कफी एण्ड रोस्टर्स- जिम्बोच्यो
पुस्तक पसलहरूको लागि प्रसिद्ध ठाउ जिम्बोच्योमा, ग्लिचले २०१५मा टोकियो भव्य प्रवेश गर्यो। त्यहाँबाट यो सानो कफी पसलले त्यस्तो द्रुत गतिमा समर्पित प्रशंसकहरूको अनुसरण गर्न शुरू गर्यो कि कफी प्रेमीहरूको आगमन संख्याले जिम्बोच्यो बासी अभिभूत भए। यद्यपि सबैभन्दा लोकप्रिय “स्वतन्त्र” कफी पसलको यो वृद्धिले ग्लिचको गुणस्तरमा कुनै कमि आएको छैन। यसका कर्मचारीले गरेको कामप्रति प्रेम हो जसले यस ठाउँलाई टोकियोमा हाम्रो मनपर्ने कफी शप बनाउँछ।
२. अब्स्कुरा कफी रोस्टर्स- साङ्गेनजाया
शहर केन्द्रको बाहिर लुकेका साङ्गेनजाया ’roundका धेरै रेस्टुरेन्टहरू र क्याफेहरूको बीचमा, एउटा भव्य कफी पसल छ जुन दुबै जिल्लामा अवस्थित रहेको कफीको पाराखिहरुमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। ओब्स्कुराले सिफन कफी बनाउनमा माहिर छ, र उनीहरूको स्वादिष्ट स्यान्डविच र खुला कंक्रिट भित्ताहरूले आराम गर्न र पुस्तक पढ्नको लागि उत्तम ठाउँ बनाउँदछ। यदि त्यो पर्याप्त छैन भने, ओब्स्कुराले कर्पोरेट ग्राहकहरूको लागि तालिम र नियमित ग्राहकहरूको लागि कार्यशालाहरू प्रदान गर्दछ। जब कफि पसलहरूले उनीहरूको उपयोगी उपयोगी ज्ञान फैलाउँदछन् मन नपर्ने त कुरै भएन।
३. सारुताहिको कफी – एविसु
सारुताहिको क्षत्र स्थिर गतिमा बढ्दै गएको छ, जुन अहिले एक विदेशी सहित विभिन्न कफी पसलहरूको लोकेसन बन्न पुगेको छ। जे होस्, सारुताहिकोको मुटु यसको एविसुमा रहेको सानो सानो पसलमा टिकेको छ। यो हेर्न सधैं राम्रो हुन्छ कि जब एक लोकप्रिय कफि पसल यसको जरामा वफादार रहन्छ। यहि कुराले यसलाई अत्यधिक प्रख्यात बनायो। सामान्य कफी भन्दा केहि फरक चाख्न चाहने व्यक्तिको लागि मेरो सुन्नुहोस र हनी लाटे लिनुहोस्।
मारुयामाले १९९१मा कारुइजावामा भव्य रुपमा प्रवेश गरे, र त्यहाँबाट बढेर देशको सबैभन्दा प्रशंसनीय र सम्मानित कफि पसलहरू मध्ये एक भयो। तिनीहरूको असाधारण कफी र यसको पुरस्कार-विजेता बारिस्टाको सीप यस्तो छ कि मारुयामाको प्रतिष्ठान मिशेलिन-तारांकित रेस्टुरेन्टहरूको लागि आरक्षित छ। जापानी बारिस्टाहरुको लागि मारुयामा कफी एउटा मानक चिन्हको रुपमा रहेको छ। निस्सन्देह, उनीहरूको फ्लेग्सिप स्टोर कारुइजावामा जारी छ, तर ओमोतेसान्दोको कफि पसल पनि उत्तिनै आकर्षक छ। शान्त, नम्र, र एकान्त, ओमोतेसान्दो स्टोरले कफीको मैदानमा एक नयाँ खेलाडी को छाप दिन्छ। तर कफीको पहिलो चुस्किले हजुरले यो पसलको गौरब देख्नु हुनेछ।
के तपाईं सानो शहरले दिने न्यानोपना महसुस गर्न चाहनुहुन्छ? सबैले एक अर्कालाई चिनेको र सबै छिमेकीहरू एक अर्काको लागि रहेको अनुभूति जापानमा गर्न नौलो कुरा हो। अचम्मको कुरा, नाकानो-वार्डको नोगाता जिल्लाले टोकियोको विशाल महानगरको हिस्सा हुँदाहुँदै पनि त्यो भावनालाई हटाउँदछ। शान्त वातावरणमा सबै रमाईलो अनुभूति गर्दै, डेली कफी स्ट्यान्डको मजा लिन्छन। यसले स्थानीयहरूलाई एक कप कफी र स्वादिष्ट मफिनको मजा लिनको लागि उत्तम स्थान बनाउँदछ।
चुकिजी मुख्यतया दुई चीजका लागि प्रसिद्ध छ: माछा मार्केट जुन तोयोसुमा सर्यो, र टुरेट कफी। टरेटले यति ठूलो भीड तान्ने एउटा कारण यसको लाटे हो। यी ठूला, स्मुद लाटे यति अविश्वसनीय छन् कि मुखमा पानी आउछ। मानिसहरू चुकिजीमा अरु कुनै उद्देश्य बिना त्यहि लाटे लिन जान हिचकिचाउँदैनन् (विशेष गरी अब माछा बजारले यस जिल्लाबाट सरेको छ)। टरेटको बिशेषता यसै बाट झल्किन्छ।
७. लिभ्स कफी रोस्टर्स – सुमिदा
यो एक विशेष हो। लिभ्स कफी रोस्टर टोकियोको कफी पारखिहरुको माझ प्रमुख बनेका छन् यो उनीहरूको उत्कृष्ट सिंगल ओरिजिन कफीको कारण हो। यो त्यस्तो स्थान हो जहाँ तपाईं आफ्नो पेयहरूसँग कुनै पनि पेस्ट्रीहरू पाउनुहुने छैन। मानिसहरु जो लिभ्स कफी रोस्टर्समा आएका छन् कफी र केवल कफीको लागी मात्र आएका हुन्। कफीमा उनीहरूको फोकस सफल पनि भएको छ, किनकि लिभ्स कफी रोष्टर्सले टोकियो सहरमा आफुलाई अथेण्टिक कफी सपको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यही कारणले कफी विशेषज्ञहरु र संसार भरिबाट कफी प्रेमीहरुलाई यो जादुई स्थान जान मन लाग्दछ।
Daily coffee stands